Izinhlelo zokusebenza ezi-7 ze-Android zokuthatha amanothi | Izindaba zamagajethi
Umbulali Uviniga | | Android, Aplicaciones, AmaSelula
Lezo zinsuku lapho incwajana yokubhalela ibiyithuluzi elidingekayo ukuphatha yonke indawo (ikakhulukazi emihlanganweni) sekuphele isikhathi eside, ikakhulukazi ngenxa inani elikhulu lamadivayisi weselula nezinhlelo zokusebenza ezinikezelwe kokufanayo okukhona namuhla.
Ngokwezibalo ezahlukahlukene ezenziwe ngongoti, uhlelo lokusebenza lwe-Android yilona oluholayo manje "kwikhekhe elikhulu", okuyisizathu sokuthi sizosebenzisa isikhashana sizama ukufaka kuhlu izicelo eziyi-7 ezingafakwa kumadivayisi eselula futhi zisetshenziswe njengencwajana yokubhala eyindida.
2 2. I-OneNote Mobile
3 3. Ama-GNotes
5 5. InkPad incwajana
6 I-6. I-Google Keep
7 7. I-Simplenote
I-EverNote iyithuluzi lokuqala esizoxoxa ngalo njengamanje (kafushane). Ungayithola kumapulatifomu ahlukene, ube enye indlela enhle ngoba yethulwa mahhala kubo bonke abasebenzisi. Ngayo unethuba lokuthi sika imininingwane emakhasini ewebhu ukuze zibhaliswe kusixhumi esibonakalayo sayo. Ungasebenzisa futhi ikhamera ukuthatha izinto ezithile ozibambe, wakhe uhlu lwemisebenzi ongayibuyekeza nganoma yisiphi isikhathi, amafayela nezikhumbuzi zezwi phakathi kwezinye izindlela ezimbalwa.
2. I-OneNote Mobile
Kuleli thuluzi Futhi singakuthola kuzingxenyekazi ezahlukahlukene, ngamadivayisi eselula e-Android anezithameli ezinkulu. Ngayo sizophinde sibe nethuba lokuqala ukubhala amanothi ombhalo, sithathe imininingwane ekhasini lewebhu ukuyifaka njengenothi phakathi kwezinye izindlela ezimbalwa. Ukukhuluma ngokubuka, Nge-OneNote Mobile ungahlela izigaba ezahlukahlukene kumathebhu anemibala ehlukene, lokhu kube okuhehayo okudonsela ukunaka kwabo bonke abasebenzisi bayo abasha. Ku-Android, i-OneNote Mobile ingakha amanothi afinyelela kuma-500 kunguqulo yayo yamahhala.
cunt Ama-GNotes Futhi singalungisa amanothi ethu, senze uhlu lwemisebenzi nawo, sithwebule izithombe kusuka kuwebhu, sithathe izithombe, senze uhlu lwezitolo, rekhoda amanothi ezwi futhi senze uhlobo oluthile lokulandela umkhondo kuthuluzi ukuze libhaliswe njengokungeziwe umsebenzi. Ngamaqhinga amancane ongafinyelela kuwo vumelanisa kulolu hlelo lokusebenza lwe-Android ne-akhawunti ye-Gmail ukuze ngikwazi ukuwabuyekeza kusuka lapho. Esinye isici esingeziwe kungenzeka ukwenza ikhophi eyisipele yawo wonke amanothi wethu abhalisiwe, kwimemori ye-Micro SD.
cunt I-ColotaNote Futhi sinethuba lokubhalisa izinhlobo ezahlukahlukene zemisebenzi njengenothi ngaphakathi kwesixhumi esibonakalayo salolu hlelo lokusebenza lwe-Android. Ubulula yilokho okukuphawula, kuphi amanothi azoqoshwa emabhokisini amancane ngesitikha. Uhlu lokuthenga, imilayezo, i-imeyili, amanothi alula futhi alula yilokho ebesingakwenza kuleli thuluzi.
5. InkPad incwajana
Into ethakazelisayo mayelana lolu hlelo lokusebenza lwe-android ukuvumelanisa kwensizakalo. Lokhu kusho ukuthi amanothi esiwakhiqiza ocingweni lweselula angabuyekezwa lapho noma nakuwebhu, lapho kufanele
I-6. I-Google Keep
Ngokufana okuningana nesicelo se-Android esishilo ngenhla, -Google Keep kusivumela ukuthi sakhe Amanothi esikhumbuzi ukuthi singathola ukuthi sabelane nabangani noma nomndeni (ngokukhetha); Amanothi asheshayo, uhlu lomsebenzi, izithombe noma yimuphi omunye umsebenzi yilokho esingakuthola ukubhalisa kuGoogle Keep, okuheha kakhulu ukuthi kungenzeka kube ukusebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zemibala kwirejista ngayinye. Ngenxa yokuvumelanisa newebhu, amanothi adalwe ku-Google Keep nawo angabuyekezwa ku-google.google.com
Noma yiluphi uhlobo lwamanothi noma izikhumbuzo esifuna ukuloba kungenziwa ku- Simplenote; isikhombimsebenzisi inomklamo omncane, lesi yisizathu sokuthi ukuhlela inothi ethile kungumsebenzi olula futhi osheshayo ukuwenza. Ngaphezu kwalokhu, singakwazi ukusebenzisa ingilazi encane yokukhulisa engxenyeni engaphezulu kwesokudla se-interface, esimweni esifanele ukuthi sinenani elikhulu labo ababhalisiwe.
Ngalezi zinhlelo zokusebenza ze-Android esizishilo, ungafinyelela kalula kuzo faka noma iyiphi yazo kumadivayisi wakho weselula (ifoni noma ithebhulethi) ngohlelo lokusebenza lwe-Android, kuthuthukisa kakhulu umsebenzi wakho wokuzijabulisa noma umkhiqizo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Amathuluzi we-7 okumele-ube nawo wokuthatha inothi ku-Android
Ungawuthumela kanjani umcimbi we-Facebook noma izindaba osukwini olwedlule